शरीर विज्ञान सिकाउने रोचक शिक्षण विधि ! – Bishwo Ghatana – World News
शरीर विज्ञान सिकाउने रोचक शिक्षण विधि !
By विश्व घटना	 On २५ पुष २०७७, शनिबार ०७:५६
स्पेनकी शिक्षक भेरोनिका दुक्वीको शिक्षण शैली विश्वप्रसिद्ध भएको छ । भालादोलिद शहरमा रहेको मारिया तेरेसा इनिगो दे तोरो स्कुलकी शिक्षक दुक्वीले चार कक्षाका विद्यार्थीलाई शरीर रचना विज्ञान (एनाटोमी) पढाउँछिन । दुक्वी विद्यार्थीलाई आन्तरिक अंगहरूको अवस्थिति देखाउन र बुझाउन बडी सुटको सहारा लिन्छिन ।
उनी शरीरका आन्तरिक अंग देखाउन आफू ती अंग प्रिन्ट भएको लुगा लगाउँछिन्। यसो हेर्दा उनका फोक्सो, आन्द्रा, भुँडी, मुटुलगायत अंग छ्याङ्ङै देखिन्छन । जसबाट विद्यार्थीहरु शरीरका विभिन्न अंगहरुबारे कुनैपनि जानकारी सजिलै लिन सक्छन ।
चार कक्षाका विद्यार्थीलाई मानव शरीरका आन्तरिक अंगबारे सिकाउने उनको यो शैली रोचक छ । दुक्वीले शिक्षणमा सिर्जनशील तरिका अपनाएको यो पहिलो चोटि होइन। विगत १५ वर्षदेखि यस पेशामा आबद्ध उनी अप्ठ्यारा र जटिल विषय विद्यार्थीलाई बुझाउन विभिन्न शैली प्रयोग गरिरहेकी हुन्छिन्। व्याकरण पढाउन उनी ‘कार्डबोर्ड क्राउन्स’को सहयोग लिइरहेकी हुन्छिन् भने इतिहास पढाउन कहिलेकाहीँ आफैँ ऐतिहासिक पात्रको भेषमा उपस्थित हुन्छिन्।
राजश्व छलेर सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण4views
अहिले सम्म किन आएन काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार4views